Ii-FAQ-Shenzhen Enimei Technology Development Co., Ltd.
Yeyiphi eyona brashi yokucoca ubuso yesilicone?
Ibrashi yokucoca ubuso ye-silicone eyenziwe ngezinto ze-silicone zebakala lokutya zokuhlanjululwa kunye ne-massage
"Ergonomics" uyilo.Ukuphatha ngokulula, ukufanisa iicontours zobuso.
Itekhnoloji yeSonic: Amanqanaba ama-6 okuqina.
I-silicone yebakala lokutya ithambile kakhulu kwaye ikhuselekile ukuyisebenzisa.
Yintoni ibrashi yokucoca i-silicone?
Ibrashi yokucoca i-silicone sisixhobo esisetyenziselwa ukucoca ubuso.Ngokuqhelekileyo inikwe amandla ibhetri ehlaziywayo kwaye ihambisa i-bristles ukususa ukungcola kunye neoli ukusuka ekujuleni kweembobo.
Iinzuzo zebrashi yokucoca i-silicone
Ukwaziswa njengesixhobo esinamandla sokuphucula inkqubo yakho yokucoca, i-brush yokucoca ubuso ingasetyenziselwa "ukunceda ukususa yonke into yokugqibela yokwenza, ioli kunye ne-debris esikhumbeni. I-brush yokucoca inokunceda ngokwenene ukunyanga i-acne ngokunceda ukuphelisa i-acne I-sebum engaphezulu ebangela ukugqabhuka kwe-acne kufuneka ukhethe isicoci esifanelekileyo kunye nesicoci esifanelekileyo.Nantoni na enzima kakhulu inokuwenza mandundu.Zama kancinane ukusebenzisa i-brush 2-4 amaxesha ngeveki kwaye uqaphele ukuba i-acne yakho iya iba mandundu.Ukuba bayayenza, isikali umva okanye uthathe ikhefu.
Ngaba ibrashi yokucoca i-silicone yobuso icocekile?
Iibhulashi zokucoca i-silicone zizona zibhulashi ezicocekileyo njengoko zingenazo i-porous kwaye ngoko ke azifaki ibhaktheriya.Iibhrashi zokucoca zinokucoceka ngakumbi kuneetawuli okanye izandla, kodwa kufuneka uqinisekise ukuba uzicoca rhoqo.Uninzi lweengcali ziya kuncoma ukucoca i-bristles ngesepha kunye namanzi afudumele emva kokusetyenziswa ngalunye, kwaye emva koko uhlambulule kanye ngeveki ngotywala obunxilisayo.
Ziziphi izixhobo zobuso be-ultrasonic ezinokwenza?
Izixhobo zobuso ze-Ultrasonic zisebenzisa ii-vibrations ze-ultrasonic ukuhambisa iimveliso zokunakekelwa kwesikhumba ezisemgangathweni.Ezi zixhobo zingasebenziyo zisetyenziselwa.
Ukuvuselela ukuhamba kwegazi phantsi kwesikhumba ukuphucula ukujikeleza
Ukukhupha iindlela zolusu olufileyo ukunika ulusu ukukhanya kwendalo
Susa ioli engaphezulu kwesikhumba ngokusebenzisa i-ion flow positive
Tyhala izinto zokuthambisa kunye nonyango lwesikhumba nzulu eluswini
Icoca iipores ezivaliweyo eluswini kwaye iphelisa amablackheads
Sesiphi isixhobo sobuso be-ultrasonic esilungele ulusu olunengxaki?
Ngokusisiseko, kuxhomekeke kwinqanaba lokhathalelo olufuna ulusu lwakho.Ngelixa usemncinci kwaye ungakhathazwanga yimiqondiso yolusu olugugayo, njengemigca emihle okanye iingxowa eziphantsi kwamehlo, usenokungakwazi ukuphelisa amabala e-oyile kunye neziphako.Isicoci se-ultrasonic esingenamanzi kwaye senzelwe ukusetyenziswa kwansuku zonke sinokuba sisisombululo esifanelekileyo kwiingxaki zakho.
Ukungcangcazela kwayo kwe-ultrasonic yenzelwe ukungena nzulu kumphezulu wolusu - apho iingxaki ziqala khona- kwaye zikhuphe ukungcola, iiseli zesikhumba ezifileyo kunye neoyile enokubangela iingxaki.Iibristles ezithambileyo zibonelela nge-massage ethambileyo enikezela konke ukuvuselela okufunekayo ukugcina ulusu lwakho lusempilweni.
Sisiphi isixhobo sobuso be-ultrasonic esilungele ulusu oluguga?
Njengoko ukhula, iimfuno zakho ziyatshintsha-kunye neemfuno zolusu lwakho.Isenokuba lidabi eliqhubekayo nxamnye nemigca emihle kunye namehlo adumbileyo, kwaye ulusu lwakho lusenokuqalisa ukubonisa ezinye iimpawu zokwaluphala, njengokujija kancinane esilevini.Nangona kunjalo, ngokudanisayo, usenokuba neengxaki ze-acne ngenxa yeoyile eninzi kunye namabala omileyo ebusweni bakho.
I-Faicial Skin Scubber ingaba yinxalenye ebalulekileyo yendlela yokukhathalela ulusu lwakho.Ukuseta kwayo "i-exfoliate" kusebenza njenge-exfoliator ethambileyo, isusa iiseli zolusu ezifileyo kunye neendawo eziyingxaki, ngelixa imowudi ye-ionic inceda ulusu lwakho lufunxe ngokulula i-toner kunye ne-moisturizer oyisebenzisa yonke imihla.
Ingaba unayo ibhrashi yokwakheka ethile oyifunayo?Jonga isikhokelo sethu sebrashi yokwenza ngezantsi ukuze ufumane ulwazi oludingayo
1. Iibrashi zomgubo
IsiKhokelo seBrashi yomgubo
Ibrashi engumgubo idla ngokuba yibrashi eshinyeneyo, enefayibha egcweleyo - eyokwenziwa okanye eyendalo - enokuguquguquka ukwenza imisebenzi eyahlukeneyo yobuhle.Le brashi ye-makeup ubiquitous (ngaphandle kokuba ungafumani zixhobo zokuzihombisa) sisixhobo esibalulekileyo kwisixhobo sakho sokwenza izinto.
Ukusebenzisa ibrashi njengesiseko, cwina ibhrashi kwimveliso engumgubo (yeempuphu kunye nomgubo okhululekileyo) kwaye ujikeleze okanye utshayele ude ube nokhuselo.Ingcebiso yePro: Kulula ukuqinisekisa ukugubungela ngokupheleleyo ukuba uqala embindini wobuso bakho kwaye ngokuthe ngcembe usebenze indlela yakho yokuphuma.
Esi sisixhobo esikhulu sabaqalayo, esifanelekileyo ngakumbi njengebhrashi yesiseko sezimbiwa kuba kulula ukuxuba kunye nokusetyenziswa kwiimveliso zakho.
Kuzo zonke iindidi zeebrashi zokuzihombisa, ibrashi engumgubo ifanelekile ukongeza umbala xa ufuna isiphumo sendalo esingaphezulu, esincinci, esifana ne-blush.Cinga izidlele ezipinki endaweni yembonakalo emangalisayo, enethoni emnyama.
2. iibrashi zesiseko
IsiKhokelo seBrashi esisiseko
Iibhrashi zesiseko ezifakwe i-tapered zihlala zisicaba, zinemilo engaphantsi epheleleyo kunye ne-taper elula.Ezi brashi zifaneleke kakhulu kwiziseko kunye nezinye iimveliso zolwelo.Ukuba unengxaki yokuthatha isigqibo malunga nohlobo lwesiseko, funda ngakumbi malunga neentlobo ezahlukeneyo zeziseko APHA.Ukusebenzisa, qala ucwilise ibrashi emanzini afudumeleyo uze ucofe ngobunono ngaphandle.Ukuba kushushu kwaye uqhele ukubila, sebenzisa amanzi apholileyo ukuze ufumane amava ahlaziyayo esicelo.
Amanzi asebenza ngeenjongo ezimbini apha: ukuqinisekisa idyasi elinganayo yesiseko, kunye nokuthintela ibrashi ekufunxeni nasiphi na isiseko - ukongela imali kuba ibrashi ayiyi kufunxa nasiphi na isithambiso.Nangona kunjalo, qaphela ukuba ucofe ngobunono nawaphi na amanzi angaphezulu kwitawuli ukuze uwasuse.Amanzi agqithisileyo anokunciphisa i-makeup yakho kwaye enze ukhuselo lwemveliso lungasebenzi.
Ziziphi iingenelo zebrashi yesiseko sombane?
1. Izantya ezi-2 ezikhethiweyo, ezilungele uhlobo lwesikhumba olwahlukileyo
2. Anti-bacterial ibhrashi imathiriyeli, ulusu-friendly
3. Imilo yebrashi eyodwa, yenza ukuba ugqibe ukwenza izimonyo kwimizuzwana
Ulugcina njani ulusu lwakho lumanzi?
Ulusu olomileyo lunombono omncinci kwaye lubuthathaka, lubonakala lubonakala lunelastic, luphelelwe ngamanzi, lunamanzi, kwaye emva kokucoca, luvame "ukuqinisa."Ulusu oluhlala lunobuntununtunu, olomileyo lubonakalisa ukuguga kwangaphambi kwexesha: akumangalisi ukuba imibimbi emininzi ihlala ibonwa eluswini olomileyo kunelusu olunamafutha.
Imaski eyondla kakhulu inokunceda ukunika i-epidermis idosi echanekileyo ye-hydration enezi mpawu.Kuya kuba kuhle ukongeza imaski yobuso kwindlela yakho yobuhle ubuncinane kanye ngeveki ekuvumela ukuba uhlambulule kwaye ufumise, uphucule umphumo wekhilimu.
Yintoni iiBlackheads kwaye zibangelwa yintoni?
Iintloko ezimnyama zikwabizwa ngokuba ziicomedones.La maqhuma amnyama avela eluswini emva kokuba i-whiteheads oxidize.Sinemingxuma ebusweni bethu, kwaye umngxuma ngamnye unoboya obunye kunye nedlala le-oyile elinye.Amadlala avelisa i-oyile ayaziwa ngokuba ngamadlala e-sebaceous.Ngelixa i-sebum inentsingiselo engalunganga, inceda ukufumisa nokukhusela ulusu.Nangona kunjalo, ukuba la madlala avelisa ubuninzi beoli egqithisileyo okanye encinci, inokuchaphazela ulusu lwakho.Ukuba unolusu olomileyo, amadlala e-oyile awavelisi i-sebum eyaneleyo ukugcina ulusu lwakho lusempilweni kwaye lufumile.Kwelinye icala, ukuba ulusu lwakho lunamafutha kakhulu, amadlala akho avelisa i-sebum egqithisileyo.Xa ulusu lwakho luvelisa i-sebum engaphezulu, kwaye ludityaniswe neeseli zolusu ezifileyo, luyakwazi ukuvala imingxunya ekhokelela ekubonakaleni kwamablackheads.Ngelishwa, ii-pores ezivaliweyo yindawo enkulu yokuba ibhaktheriya izame ukukhokelela kusulelo olubuhlungu ngendlela yamaqhakuva kunye namabala.
Ezinye izinto ezinokunyusa kwaye zibe negalelo ekubonakaleni kwama-blackheads ukungalingani kwehomoni, ukutya okungenamsoco, uxinzelelo, ukungcola, ukujuluka, njl.
Yintoni umsebenzi we-microcrystalline blackhead remover?
Umatshini wokucoca i-Microcrystalline blackhead remover, esisisixhobo sobuhle esinemisebenzi emininzi, njengeDermabrasion, i-compact, i-pores ecocekileyo, ukususa i-acne kunye nokufunxa i-blackhead.Ukusebenzisa ngaphezu kwe-100,000 i-micro-crystal drilling particles kunye ne-vacuum suction ukuphelisa umaleko wangaphandle wolusu olugugayo kunye neepores zokungcola, ukwenzela ukuba iipores zibe nokucocwa ngakumbi, kwaye ulusu lwakho luya kuba lula, lumhlophe kwaye luthenda.Bubuchwephesha obungangeneleliyo nobungacaphukisiyo obunokulawula iqondo ledermabrasion ngebha yokufunxa kuburhabaxa bedayimani.Ngelo xesha, i-4 imilo eyahlukeneyo ye-probes inemisebenzi eyahlukeneyo, njenge-microdermabrasion, ihlambulule i-pore kunye nokunye.
Isebenza njani iMicrocrystalline Blackhead remover?
Uhlobo loxinzelelo lwe-vacuum lutsala itekhnoloji yobuso bemilo ye-V
1. Ngenkqubo yokufunxa i-vacuum, inokutsala kwaye ihlaziye ulusu lwakho, ikhuthaze ukujikeleza kwegazi kunye ne-lymph, ikhuthaze i-metabolism, ukwenzela ukuba izicubu ze-dermal zifumane izongezelelo ezaneleyo zezondlo, ukwenzela ukuba ulusu lube lukhuni kwaye lube lula.
2. Ukuphucula ukunyanzeliswa kolusu, ukuze isisombululo sobuhle sibe nzulu kwizicubu zolusu, ngaloo ndlela kuphuculwe ukufuma kolusu, kwenza ulusu luqaqambe ngakumbi.
3. Ukukhuthaza i-collagen fiber fibroblasts ukuvelisa i-collagen fibers, ukwandisa amandla okukhusela ulusu, ukunqanda umonakalo ongcolileyo we-radical free eluswini, ugcine ukunyanzeliswa kwesikhumba kunye nokuqina.
4. Ukukhuthaza ukuvuselelwa kweeseli zolusu kunye nokuphucula amajoni omzimba kunye namandla okuzikhusela kwi-UV, i-tissue melanin precipitation ebusweni ukugcina ukukhanya kolusu, ulusu luba sempilweni ngakumbi.
5. Ukuphucula i-microcirculation yolusu, ukukhuthaza i-melanin metabolism, ngaloo ndlela unciphisa amabala e-pigmentation yesikhumba kwi-melanin.
Yintoni i-blackhead remover microcrystal head?
I-Microcrystalline probe kwiiminerali zendalo ze-microcrystalline drill particles, inokususa ngobunono i-cuticle, emva koko ulusu lwakho luya kuba lugudileyo kwaye luhlaziye, luya kulutyhalela kude ngobunono ubumdaka obukumphezulu, ngelixa umsebenzi we-adsorption, unolusu Kubumdaka obufunxayo, kwaye emva koko ulahle iiseli zolusu ngelixa ukhuthaza ukujikeleza kwegazi, kuluncedo kuhlaziyo lwendalo lweeseli ukugcina ulusu lugudile, luhlaziya ulusu oluncinci.
Ezinye izinto ezinokunyusa kwaye zibe negalelo ekubonakaleni kwama-blackheads kukungalingani kwehomoni, ukutya okungalunganga, uxinzelelo, ungcoliseko, ukubila, njl.
Ziphi iiBlackheads ezixhaphake kakhulu?
I-Blackheads ixhaphake kakhulu ebusweni kuba ineyona ndawo iphezulu yeengqungquthela yeoli.Ngokuqhelekileyo, i-t-zone (ibunzi kunye nommandla wempumlo) ixhaphake kakhulu kwi-blackheads kuba amadlala kule mimandla avame ukuvelisa i-sebum eninzi.Isifuba kunye nomqolo nazo zixhaphake kakhulu ngamabala amnyama.Inyaniso ebangela umdla kukuba, kuphela iintendelezo zezandla neenyawo kuphela ezingenawo amadlala eoli.
Yeyiphi indlela efanelekileyo yokusebenzisa i-vacuum remover emnyama?
Ukubukela ai-blackhead vacuum removeremsebenzini ngeYouTube yinto enye-eneneni ukusebenzisa enye ngokuchanekileyo ngumdlalo webhola owahluke ngokupheleleyo.Khumbula-ukusetyenziswa kakubi kunokukhokelela ekudumbeni, ukutyunyuzwa okukhanyayo, okanye i-capillaries ephukile (kwaye, ngokucacileyo, akukho mntu ufuna oko).
Umzobi ucebisa ukusebenzisai-blackhead vacuum removerskwisikhumba esicocekileyo, esomileyo, kunye nokuqhuba isixhobo ukusuka embindini wobuso bakho ngaphandle ngokufutshane, imivumbo enye.“Eyona nto iphambili kukushukuma rhoqo,” utsho, ecacisa ukuba awufuni kuvumela ivacuum ukuba ihlale kwindawo enye kangangexesha elide."Ukufaka uxinzelelo oluninzi kwindawo enye kunokubangela ukwenzakala eluswini."
Yintoni i-ultrasonic skin scrubber?
Ngokuqhelekileyo kwaziwa ngokuba yi-skin scraper, i-skin scrubber ye-ultrasonic sisixhobo esisebenzisa i-frequencies ephezulu ukuqokelela ukungcola kunye neoli kwi-pores yakho.
Ukuba ucinga ukuba i-ultrasonic skin scrubbers isebenzisa ii-vibrations ukucoca ulusu lwakho, ngoko ulungile.Nangona kunjalo, endaweni yefom yerabha, ezi zikhuhla zenziwe ngetsimbi kwaye zisebenzisa i-vibrations ephezulu-frequency ngokusebenzisa amaza omsindo ukutshintsha ulusu ukusuka kwelinye iseli ukuya kwelinye.Ezi zikhuhla zesikhumba ze-ultrasonic zikhupha ngobumnene ulusu kwaye ziqokelele oko kuchithwa.
Ziziphi iiNzuzo ze-ultrasonic skin scrubbe?
Ukucocwa nzulu kwesikhumba
Ukuphucula ukuthungwa kwesikhumba kunye nethoni
Ubumnene kunezinye iindlela zokukhupha
I-Ultrasonic Scrubbers iphinda ikhuphe ukukhanya okukhanyayo, kwaye ikhuthaza ukukhula kwe-collagen entsha ukuzalisa imigca emihle, okwenza ulusu lubonakale lugcwele, luhlaziye kwaye lukhanyise ngakumbi.
I-skin scrubbers engcono kakhulu ye-ultrasonic iza kwiisethingi ezahlukeneyo ukuze abasebenzisi baziqhelanise neendlela zokunyamekela ulusu kukhuseleko kunye nobumfihlo bekhaya labo.
Ngaba ndingasebenzisa ibrashi yokucoca ubuso ukuba ndine-acne ebusweni bam?
Ayinakusetyenziswa kuphela, kodwa inokukunceda ukuba ucoceke ngcono i-acne.I-brush inefuthe lokucoca ngokujulile iipores.Inokuthatha iibhaktheriya, uthuli, ukungcola, igrisi kwi-pores, kwaye inokucoca ngcono ulusu.
Ukuba usebenzisa i-ointment ukunyanga i-acne, ukungcola kwesikhumba kuphelile, kwaye i-ointment iya kuthatha ngcono.Xa ukhetha i-brush, khetha i-brush ene-softer kunye ne-bristles emide ukwenzela ukuba ayiyi kulimaza ulusu.
Nangona ungasebenzisa ibrashi yokucoca ubuso, awukwazi ukuyisebenzisa yonke imihla.Awukwazi ukuyisebenzisa ngaphezu kwe-1-2 amaxesha ngeveki.Ngaphambi kokuba uyisebenzise, ​​​​kufuneka ucoce intloko yebrashi okanye ibhaktheriya iya kuhamba ebusweni bakho.
Kodwa ayizizo zonke i-acne ezinokusebenzisa ibrashi yokucoca ubuso, ukuba i-acne yakho evuthayo ifikelele kwimodareyitha ukuya kubunzima, awukwazi ukuyisebenzisa.
Ngaba kukho naziphi na izinto ezingeloncedo kwibrashi yokucoca ubuso?
Ngokomzekelo, amantombazana ane-psoriasis okanye i-eczema akakwazi ukuyisebenzisa.Ukuba ubuso butshiswe lilanga kwaye kukho ulusu oluphukileyo, akufanele lusetyenziswe.
Isicoci soMbane soBuso
Kwabo banezihlunu ezibuthathaka, kucetyiswa ukuba usebenzise ibrashi yokucoca ubuso kanye okanye kabini ngeveki.Xa uyisebenzisa, ungayisebenzisi ixesha elide, kwaye ungacinezeli ngamandla esikhumbeni.Kodwa ungakhathazeki kakhulu ngoodade abancinci abanezihlunu ezibuthathaka.Zininzi iibrashi zokucoca ubuso ezingasetyenziselwa izihlunu ezibuthathaka.Umzekelo, iibhrashi zobuso ze-silicone ezikhuselayo zingasetyenziselwa izihlunu ezibuthathaka.
Ukuba awucacanga ngesikhumba sakho, ungaya esibhedlele ukuze ufumane ugqirha ukuze akuncede uqonde.
IShenzhen Enimei Technology Development Co., Ltd.
© Copyright 20142021: Onke Amalungelo Agciniwe.